Resaky ny mpitsimpona akotry : taona fampisehoana fahendrena | NewsMada
Ampy izay ny fandaniana andro nolazaina nanaovana fanomanana sy fakana bahana, tsy resaka lazaina ho tena izy intsony no andrasana fa asa ary asa mamokatra. Apetraka eo amin’izay ny adiady na madinika na adilahy pôlitika, ady tsy vitan’ny fikarohana fifandanjan’ny fahefana izay samy manana ny azy na ny fanatanterahana na ny fanaovan-dalàna, fa fifanjevoana amina fifampisintonam-pahefana noho ny tetika antoko mifono fitiavan-tena. Raha hitsihitsina ny fitenenana dia tsorina amin’ny filazana fa apetrapetraka ny raharaham-pirenena dia lasa ny fitsijovana ny 2018 no imasoan’ny rehetra. Izany hoe efa samy nanomboka ny fanomanana ny fifidianana izay ho lasa Filoha eo amin’ny fihodinana atao raha afaka roa taona.
Marina fa tsy ho voafehy arak’izay tokony ho izy ny raharaham-pirenena raha tsy mipetrapetraka ny rafitra antoko tompon’andraikitra amin’ny famolavolana ny mpitolona sy amin’ny famerana ny tanjona tratrariny ary ny fomba isahanany an’izany tsy hay adino koa anefa fa eo ny tetika tsy maintsy ananany mba ahatongavany amin’ny toerana ahazoana ireo fahefana samihafa. Ity farany ity anefa no ataon’ny mpilalao pôlitika adidy voalohany, dia io no mahavariana azy rehetra ifanaovany ady saritaka.
Tsy hita izay maha samihafa ny kabarin-drangahy iray iry amin’ny zavatra ambaran’ilay Olobe itsy nefa dia tsy vitan’ny mpifaninana tsotra izy ireo fa tena mifandrafy mihitsy, tsy ny tetika fanasoavana ny firenena no tsy itoviana fa ny mamy sy ny saosy no ifandrangotana samy tia handrombaka ary samy tsy tia hizara.
Tsy misy mahadiso na maharatsy izany fijeren-davitra eo amin’ny fanomanana ny fifidianana amin’ny 2018 izany fa tsy ny raharaham-pirenena no ampandeferina noho izany ary tsy ny fahefana sahanin’ny tena no entina ampiasaina amin’izany. Izany moa dia arakaraky ny mahamatotra ny mpifidy no afahany manana fahaiza-mifidy. Manana traikefa ny vahoaka raha ny fahadisoam-panantenana no resahana, nefa kosa mbola ahiana ihany ny fisian’ny fakampanahy samihafa fa indrindra indrindra araky ny tazana tamin’ny fifidianana loholona farany teo dia mahery setra sy mahery vintana noho ny fahamatoran’ny mpifidy ny fahaiza-manaon’ireo mampiasa fanerena. Lany fitokisana amin’izany Ceni izany ny maro, be ireo resy lahatra fa adinony an-dalana ny tsy fiankinany antoka hijoroany mitady hirona tsikelikely ho lasa fitaovana. Dia mbola ho ankoso-bolamena vetivety dia manompo mangery varahana.